Ny Tari-dalana avy amin'ny Semalt - Ahoana no hanafahana ny tranokalanao amin'ny fanafihana hack
Maro ny heloka bevava cyber mandeha amin'ny Internet. Vokatr'izany dia mila mijanona ny olonamahafantatra ireo olona ireo. Ho an'ny olona manana tranonkala iray, ny fiarovana ny e-varotra fandraisana an-tanana sy ny an'ny mpanjifanao dia ao anatinaotanana. Ny hackers dia fototry ny fanafihana tranainy, pejy phishing ary koa ireo hack malaky hafa toy ny fampiasana ny tranaona aty amin'ny mailakakofehy mifamatotra azy.
Mazàna, ireo mpikomy dia mikendry vohikala noho ny antony maro. Mety ho avy amin'ny mpifaninana izy ireo, mitady hitondrana ny tranokalanao - sw5550a. Amin'ny tranga hafa, ireo hackers dia mety ho olona mitady ny mombamomba azy manokana toy ny tenimiafina mailakana fampahalalam-baovao amin'ny carte de crédit. Misy karazana hacks maro, ny ankamaroan'izy ireo dia mihodina manodidina ny famelezana ny niharam-boina.
Jack Miller, tompon'andraikitra ambony avy amin'ny Semalt ,dia manadihady sasantsasany amin'ireo toro-hevitra izay afaka manakana anao hiala amin'ireo mpihetraketraka ireo:
1. Mampiasà tenimiafina azo antoka.
Amin'ny maha-administrateur amin'ny tranonkala iray, ny tenimiafinao dia manana andraikitra goavana amin'ny fanaovanaAzo antoka fa ny tranokala manontolo no voaro. Ny tenimiafina tsotra toy ny 12345 dia tsy azo antoka ary mety ho tratry ny fanafihana hack na hack. Amin'ny hafaRaha tsy izany dia tsy tokony hampiasa tenimiafina izay tsy dia mazava loatra ianao. Ny tenimiafina toy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na ny anaran'ny zaza dia tsy ampy loatra. Tokony ho izanyendriny iray amin'ny teny miavaka, mifangaro karazan'olona samihafa amin'ny endrika samihafa..Tokony ho azo antoka koa fa misy antoko hafa mampiasaNy tranonkala koa dia manana tenimiafina azo antoka.
2. Ampiasao ny HTTPS.
Ny fampiasana fiarovana fiarovana amin'ny sehatra dia midika hoe tsara indrindra ho an'ny tranonkalanao. Ohatra,tranonkala izay manana tranonkala fampiantranoana HTTPS dia manana tombony amin'ireo izay tsy. Vokatr'izany, ny fiarovana ny tranokalanao ary koaNy an'ny mpanjifanao dia miankina tanteraka amin'ny drafitra fampiantranoana anao. Ankoatra izany, ireo olona izay mandray soa avy amin'ny fampiasana ireo hevitra ireo dia miafara amin'ny fanaovana antokatranonkala izay tsy afaka miditra ny ankamaroan'ny mpihetraketraka.
3. Aoka ho fantatry ny skripts.
Ny fampiharana dia lasa ampahany amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny ankamaroan'ny olona mandanyFotoana marobe amin'ny aterineto no miatrika fanandramana hack maro. Ny zava-misy dia manjary ratsy kokoa ho an'ireo olona izay samy hafa ny aterinetofomba fitsaboana toy ny admir amin'ny tranokala e-commerce. Ny hackers dia afaka manaisotra vohikala iray ary manapotika ny sasany amin'ireo lafiny manan-danja toy ny asa.Ny ezakeminao (SEO) fikarohana ataonao dia mety ho lasa tsy misy na inona na inona noho ny hacks tsotra sy mahomby. Vokatr'izany, ny fiarovana ny anaotranonkala ary ny an'ny fiarovana ny mpanjifa dia eo an-tananao amin'ny maha-admin ny tranonkala. Azonao atao ny mampiasa ireo torohevitra ao anatin'ity toro lalana ity mba hanaovanaNy tranokalanao dia miantoka, porofon'ny bala amin'ny hackers.